Micromoney CEO@micromoney-mm.comမိုက်ခရိုမန်းနီး အကြောင်း အွန်လိုင်းကြိုတင်ယူငွေ လျှောက်ထားရန်အွန်လိုင်းကြိုတင်ယူငွေ ပေးဆပ်ရန်အမေးများဆုံး မေးခွန်းများဆက်သွယ်ရန်
အသုံးပြုသူ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းချိန် - မနက် ၈ နာရီခွဲမှ ညနေ ၆ နာရီ ပိတ်ရက်မရှိ
ငွေပြန်လွှဲသည့် နည်းလမ်းများမှာ လွယ်ကူပါသည်:
CB (သို့) KBZ (သို့) AYA ဘဏ်များမှတစ်ဆင့် ငွေလွှဲခြင်း
1နီးစပ်ရာ ဘဏ်ခွဲသို့ သွားပါ။
2ငွေလွှဲမည့်အကြောင်း ဘဏ်ဝန်ထမ်းအား သိပေးပါ။
3 လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ပါ။ (သင့်နာမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ မိုက်ခရိုမန်းနီး၏ ဘဏ်အကောင့်နံပါတ် အစရှိသဖြင့်) 4မိုက်ခရိုမန်းနီး၏ ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။:
က) CB ဘဏ်အတွက် ၀၀၈၆၆၀၀၁၀၀၀၂၇၁၃၈
ခ) KBZ ဘဏ်အတွက် ၀၆၀၃၀၁၀၆၀၀၅၂၅၁၁၀၁ ဂ) AYA ဘဏ်အတွက် ၀၀၈၀၂၀၁၀၁၀၁၄၇၃၈၁ ၂
အခြားငွေလွှဲသည့်စနစ်များမှ ငွေလွှဲခြင်း 1MyKyat ဖြင့် ငွေလွှဲခြင်း အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။
a)	Mykyat သို့ဝင်ပါ
b)	“Send Money” ကိုနှိပ်ပါ
c)	မိုက်ခရိုမန်းနီး၏ ဖုန်းနံပါတ်၊ လွှဲမည့်ပမာဏနှင့် ငွေလွှဲစာကို ရိုက်ပါ။ ငွေလွှဲစာမှာ အရေးမကြီးပါ။ ထို့နောက် “Continue” ကို နှိပ်ပါ။ d)	အချက်အလက်များအား သေချာစွာ စစ်ဆေး၍ ဆက်သွားပါ။ e)	အောင်မြင်ပါသည်!
2OK$ဖြင့် ငွေလွှဲခြင်း အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။ a)	သင်၏ OK$ အကောင့်ထဲသို့ ဝင်ပါ။ (ငွေလွှဲခ မပေးရပါ။) b)	“Pay to” အားနှိပ်ပါ။ c)	မိုက်ခရိုမန်းနီး၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို ရိုက်သွင်းပါ။ (အပေါ်အောက် နှစ်ကြိမ်ရိုက်ရန် လိုပါသည်။) မိုက်ခရိုမန်းနီ၏ အကောင့်နံပါတ်မှာ 09454152526ဖြစ်သည်။ ပမဏကို ထည့်ပါ။ ထို့နောက် “Submit” ကို နှိပ်ပါ။
d)	အချက်အလက်များအား သေချာ စစ်ဆေး၍ “Pay” ကို နှိပ်ပါ။
၃Wave Moneyဖြင့် ပေးခြင်း။ သတိပြုရန်: - ဤ နည်းလမ်းအား အသုံးပြုသည်ဆိုပါက ငွေလွှဲခ ၉၀၀ ကျပ်ကို ထည့်သွင်းလွှဲပေးရန်လိုပါသည်။ (ဥပမာ - သင်သည် ကျပ် ၅၀၀၀၀ လွှဲရမည်ဆိုပါက ၅၀၉၀၀ ကျပ်လွှဲပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ a)	သင်၏ Wave Money အကောင့်သို့ ဝင်ပါ။
b)	“Send money” ကို နှိပ်ပါ။
c)	“Enter number” ကို နှိပ်ပါ။ d)	မိုက်ခရိုမန်းနီး၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို နှိပ်ပါ။ - 09768207324 ထို့နောက် “Continue” ကို နှိပ်ပါ။ e)	ပမာဏကို ထည့်ပါ။ ထို့နောက် “Continue” ကို နှိပ်ပါ။ f)	အချက်အလက်များအား သေချာစွာ စစ်ဆေးပါ။ ထို့နောက် “Yes, everything is correct” ကို နှိပ်ပါ။ g)	သင်၏ PIN နံပါတ်ကို နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် “Continue” ကို နှိပ်ပါ။ h)	အောင်မြင်ပါသည်!
CB (သို့) KBZ (သို့) AYA ဘဏ်များ၏ မိုဘိုင်းလ်ဘဏ်အကောင့်မှ လွှဲပေးခြင်း
၁အပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသော ဘဏ်တစ်ခုခုထံတွင် အင်တာနက် ဘဏ်အကောင့်ကို ဖွင့်ပါ။ အင်တာနက်ဘဏ်အကောင့် ဖွင့်ခြင်း a)	အင်တာနက်ချိတ်ထားသော သင့်ဖုန်းအား ဘဏ်ကို ယူသွားပါ။ b)	သင် အင်တာနက် ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်မည်ဟု ဘဏ်ဝန်ထမ်းအား အကြောင်းကြားပါ။ c)	တာဝန်ရှိ ဘဏ်ဝန်ထမ်းမှ လမ်းညွှန်သည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။ d)	နောက်ဆုံးတွင် အင်တာနက် ဘဏ်အကောင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ e)	ငွေလွှဲနည်းအား ဘဏ်ဝန်ထမ်းကို မေးမြန်းခြင်းသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ မိုက်ခရိုမန်းနီး၏ ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ သင်၏ ပြန်ပေးငွေကို လွှဲပေးပါ။ a)	မိုဘိုင်းလ်အပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်၍ သင်၏ ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ ဝင်ပါ။ b)	“Services” ကိုရွေးပါ။ c)	“Banking” ကို နှိပ်ပါ။ ထိုအခါ စာရင်းတစ်ခု အောက်ချလာပါလိမ့်မယ်။ d)	“Transfer to Other Account/Card” ကို ရွေးပါ။
e)	သင်၏ ဘဏ်အကောင့်ကို ရွေးပါ။
f)	မိုက်ခရိုမန်းနီး၏ ဘဏ်အကောင့်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ (မိုက်ခရိုမန်းနီး၏ ဘဏ်အကောင့်များကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။)
g)	ပမာဏကို ထည့်သွင်းပါ။
h)	အချက်အလက်များကို သေချာစွာ စစ်ဆေး၍ “ok” ကို နှိပ်ပါ။
၃ မိုက်ခရိုမန်းနီး၏ ဘဏ်အကောင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ က) CB ဘဏ်အတွက် ၀၀၈၆၆၀၀၁၀၀၀၂၇၁၃၈ ခ) KBZ ဘဏ်အတွက် ၀၆၀၃၀၁၀၆၀၀၅၂၅၁၁၀၁ ဂ) AYA ဘဏ်အတွက် ၀၀၈၀၂၀၁၀၁၀၁၄၇၃၈၁ ၄
CB (သို့) KBZ (သို့) AYA ဘဏ်တို့၏ ATM မှ ငွေလွှဲခြင်း။ လက်ရှိတွင် ဤ နည်းအသုံးပြုခြင်းမှာ အဆင်မပြေသေးပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ပေးပို့သူ၏ အမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မသိနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
၁အနီးနားရှိ ATM စက်အား ရှာပါ။ ၂သင်၏ ATM ကဒ်အားထည့်သွင်း၍ သင်၏ PIN နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
၃ 'Other Transaction' ကို ရွေးပါ။
၄ 'Transfer' ကို ရွေးပါ။
၅မိုက်ခရိုမန်းနီး၏ ဘဏ်အကောင့်ကို ထည့်သွင်း၍ “Confirm” ကို နှိပ်ပါ။ (မိုက်ခရိုမန်းနီး၏ ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်များမှာ အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။) ၆သင်၏ ပြန်ပေးငွေ ပမာဏကို ထည့်သွင်းပါ။ ၇ “Yes” ကို နှိပ်ပါ။ ၈ အချက်အလက်များအား သေချာစွာစစ်ဆေး၍ 'Yes' ကို နှိပ်၍ အတည်ပြုပါ။
က) CB ဘဏ်အတွက် ၀၀၈၆၆၀၀၁၀၀၀၂၇၁၃၈ ခ) KBZ ဘဏ်အတွက် ၀၆၀၃၀၁၀၆၀၀၅၂၅၁၁၀၁ ဂ) AYA ဘဏ်အတွက် ၀၀၈၀၂၀၁၀၁၀၁၄၇၃၈၁ Apply Nowပင်မာစာမျက်နှာမိုက်ခရိုမန်းနီး အကြောင်း အွန်လိုင်းကြိုတင်ယူငွေ လျှောက်ထားရန်အွန်လိုင်းကြိုတင်ယူငွေ ပေးဆပ်ရန်အမေးများဆုံး မေးခွန်းများဆက်သွယ်ရန်ဘာသာစကားENMYBM unicodeအမှတ်-၅၆၁၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ၈လွာ၊ အခန်းအမှတ်-၈၂၆၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်နံပါတ် 1201503076 2016 All rights reserved Micromoney.